INONA no ataonao rehefa misy mitsikitsiky aminao? Matetika ianao no mitsiky aminy koa sady faly. Rehefa vokatry ny fo tokoa ny tsiky ataon’ny namanao na ny olona iray tsy fantatrao, dia lasa te hitsiky koa ianao sady mahazo aina. Hoy i Magdalena momba ny vadiny efa maty: “Nahafinaritra be ny tsikin’i Georg, ka tony sy tsy nanana ahiahy aho rehefa nifanojo ny masonay.”
Ny tsiky avy amin’ny fo no ahitana hoe faly sy sambatra ny olona iray. ‘Hoatran’ny efa voajanahary amin’ny olona ny mitsiky’, hoy ny gazety iray momba ny psikolojia ao amin’ny Internet. Lazainy koa fa na ny zaza menavava aza mahay “mamantatra tsara ny fihetseham-po asehon’ny endrika.” Hoy ihany izy io: “Miana-javatra momba anao ny hafa rehefa mitsiky ianao, ary arakaraka izay ny fomba itondrany anao.”
Nodinihin’ny mpikaroka tao amin’ny Oniversiten’i Harvard any Etazonia, raha nisy vokany tamin’ny zokiolona ny endrika nasehon’ireo mpitsabo azy. Voamarika fa afa-po sy salama ary milamin-tsaina kokoa ny zokiolona, rehefa hita tamin’ny endrik’ireo mpitsabo hoe “sariaka sy be fiahiana ary mangoraka” izy ireo. Ny mifanohitra amin’izany kosa no nitranga rehefa montotra ny mpitsabo.
Na ianao koa aza mety handray soa rehefa mitsikitsiky. Hitan’ny mpikaroka mantsy fa matoky tena sy falifaly kokoa ny olona mitsikitsiky, ary tsy dia miady saina loatra. Mety hifanohitra amin’izany kosa ny vokany raha miketrona foana izy.
“NATANJA-TSAINA” AHO REHEFA NAHITA AZY IREO NITSIKY
Efa Vavolombelon’i Jehovah i Magdalena, ilay voaresaka tetsy aloha, nandritra ny Ady Lehibe II. Tsy nety nanohana ny fitondrana nazia izy sy ny fianakaviany, ka nalefa tany amin’ny toby fitanana tany Ravensbrück, any Alemaina. Hoy izy: “Indraindray izahay tsy navelan’ny mpiambina niresaka tamin’ny voafonja hafa. Tsy afaka nisakana anay tsy hitsiky anefa ry zareo. Vao nahita ny mamako sy ny rahavaviko nitsiky fotsiny aho, dia efa natanja-tsaina sady vao mainka tapa-kevitra ny hiaritra.”
Mieritreritra angamba ianao hoe tsy dia misy antony itsikiana loatra amin’izao fiainana efa sarotra izao! Tadidio anefa fa ny saina ihany matetika no mibaiko ny fihetseham-po. (Ohabolana 15:15; Filipianina 4:8, 9) Miezaha àry mifantoka amin’ny zavatra tsara sy mampahery, na dia mety ho sarotra aza izany. * Betsaka no mahavita an’izany rehefa mamaky Baiboly sy mivavaka. (Matio 5:3; Filipianina 4:6, 7) Miverimberina ao amin’ny Baiboly mantsy ny hoe “sambatra” sy “faly” ary ny teny hafa avy amin’ireo fototeny ireo. Maninona àry raha mamaky pejy iray na roa isan’andro? Ho hitanao fa hitsikitsiky matetika kokoa ianao.
Aza miandry ny hafa hitsiky aminao, fa tonga dia itsikio izy. Hanampy azy ho faly kokoa izany mandritra ny andro. Tadidio foana àry hoe fanomezana avy amin’Andriamanitra ny tsikinao. Mahasoa anao sy ny olona mihaona aminao izy io.
^ feh. 8 Jereo ilay lahatsoratra hoe “Te ‘Hanao Fety Foana’ ve Ianao?” ao amin’​ny Mifohaza! Novambra 2013.
Nahoana ny olona maro no kivikivy? Hita ato ny fomba ampiasana ny Baiboly mba hahatonga antsika ho falifaly foana.
Hizara Hizara Mba Mitsikitsikia E!